खुशीको खबर ! क्रिस गेलले पोखरा राइनोजबाटई पीएल खेल्ने - News20 Media
January 30, 2020 January 30, 2020 N20LeaveaComment on खुशीको खबर ! क्रिस गेलले पोखरा राइनोजबाटई पीएल खेल्ने
काठमाडौं : क्रिस गेलले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा पोखरा राइनोजबाट खेल्ने भएका छन् । पोखरा राइनोजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि गेल आफ्नो आइकनिक खेलाडी रहेको जानकारी दिएको हो । गेल विश्व क्रिकेटमा लामो सर्ट प्रहार गर्न माहिर खेलाडी हुन् । उनी नेपाल आउने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । काठमाडौं आउने पक्का भएका गेलले खेल भने मात्रै २ वटा खेल्नेछन् ।
तर, उनले ईपीएल खेल्न निश्चित भने बिहीबार मात्रै भएको हो । पोखरा अघिल्लो बर्ष रिचार्ड लेभि लगायतका खेलाडी हुँदा पनि समुह चरणबाटै आउट भएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका हासिम अमला, वेष्ट इन्डिजका अर्का खेलाडी ड्यान स्मिथ र अफगानिस्तान मोहम्मद साहजाद, इङ्ग्ल्यान्णका लायम पुलेक्केट, श्रीलंकाका उपल थरंगाले ईपीएल खेल्ने पक्का भइसकेको छ ।
स्मिथले भैरहवा, थरंगाले ललितपुर, गेलले पोखरा र साहजादले चितवनबाट खेल्ने निश्चित भइसकेको छ भने अमला र पुलिक्केटले कुन टोलीबाट खेल्ने भन्ने पक्का भएको छैन । तेस्रो संस्करणको ईपीएल चैत १ देखि १५ सम्म किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
विश्व नम्बर एक राफाइल नाडाल बुधबार सेमिफाइनलमा अस्ट्रियाका डोमिनिक थिमसँग स्तब्ध हुँदै वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपनबाट बाहिरिएका छन्। नाडालसँग गत दुई संस्करणका फ्रेन्च ओपनको फाइनलमा हारको बदला लिँदै थिमले सेमिफाइनलमा जर्मनीका एलेक्जेन्डर जेरेभसँगको भेट पक्का गरेका हुन्। विश्व नम्बर पाँच थिमले स्पेनिस स्टार नाडाललाई ७–६(७-३),७–६(७-४), ४–६ र ७–६(८-६) ले हराउँदै पहिलो पटक ग्रान्ड स्लाम जित्ने अभियानमा छन्। यता, हारसँगै नाडालको २० ग्रान्ड स्लाम बराबरी गर्ने लक्ष्य यस पटक पनि पूरा हुन सकेन।
विश्व वरीयताको सातौं स्थानका जर्मनीका २२ वर्षे जेरेभले भने ३४ वर्षे स्टान वावरिंकालाई १–६, ६–३, ६–४ र ६–२ ले स्तब्ध बनाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए। अर्को सेमिफाइनलमा दुई चर्चित स्टार नोभाक जोकोभिच र रोजर फेडेरर भिड्नेछन्। अस्ट्रेलियन ओपन सातौं पटक विजेता जोकोभिच र छैटौं पटकका च्याम्पियन फेडेररबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला १४ संस्करणका अस्ट्रेलियन ओपनमा यी दुईले १२ पटक जितेका छन्।
नाडालसँगको जितपछि थिमले दुवै जना उत्कृष्ट लयमा रहे पनि आजको दिन आफ्नो नाममा रहेको बताए। ‘दुवैको यसअघिका खेल राम्रो थिए। त्यसैले हामी दुवै जना उत्कृष्ट लयमा थियौं,’ अस्ट्रेलियन ओपनको सेमिफाइनलमा पुग्ने दोस्रो अस्ट्रियन खेलाडी बनेका थिमले भने, ‘तर आज म अलि भाग्यमानी भएँ जस्तो लाग्छ। किनकि उनी सदैव उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। उनलाई परास्त गर्न केही भाग्यमानी पनि हुनुपर्छ।’
अस्ट्रेलियन ओपन सातौं पटक विजेता जोकोभिच र छैटौं पटकका च्याम्पियन फेडेररबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला १४ संस्करणका अस्ट्रेलियन ओपनमा यी दुईले १२ पटक जितेका छन्। नाडालविरुद्धको जितसँगै थिमले उनीसँगको हार शृंखला ९–४ ले छोट्याएका छन्। पहिलो दुई सेट गुमाएर पनि पुनरागमनको संकेत गरेका नाडालले चौथो सेटमा गुमाएसँगै थिमलाई खेल सुम्पिए। विश्व टेनिसका तीन उत्कृष्ट खेलाडी नाडाल, जोकोभिच र फेडेररमध्ये एकलाई थिमले स्तब्ध बनाए। बाँकी दुई ध्ये एकलाई पनि फाइनलमा थिम र जेरेभमध्ये एक जनाले स्तब्ध बनाउने अवसर मिल्नेछ। महिलातर्फ पनि विम्बल्डन च्याम्पियन सिमोना हालेफले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएकी छन्।
विश्व नम्बर चार रोमानियनकी स्टार हालेफले इस्टोनियाकी एनेट कोन्टाभिइटलाई ६–१ र ६–१ ले सहजै हराउँदै सेमिफाइनलमा स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजासँगको भेट पक्का गरिन्। जितपछि सिमोनाले विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा सेमिफाइनलमा पुगेपछि ठूलो राहत मिलेको बताइन्। दुई ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन गार्बिनले रसियाकी एनास्टासिया पाब्ल्युचेनकोभालाई ७–५ र ६–३ ले हराउँदै लयमा फर्किएको संकेत देखाएकी छन्। अर्को सेमिफाइनलमा विश्व नम्बर एक अस्ट्रेलियाकी एस्लेघ बार्टी र अमेरिकाकी सोफिया केनिनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।